काठमाडौं प्रवेश गर्न भनसुन ! पास भिरेर आएकामा भेटियो संक्रमण – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडौं प्रवेश गर्न भनसुन ! पास भिरेर आएकामा भेटियो संक्रमण
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएकी मच्छेगाउँ, काठमाडौंकी महिला सोमबार मात्र निजी सवारीसाधनमार्फत काठमाडौं प्रवेश गरिन् । कञ्चनपुरको वेदकोटकी अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी जवान उनी देवरको ब्रतबन्धका लागि घर गएकी थिइन् ।
फर्किएपछि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा हवल्दार रहेका पतिले कोरोना परीक्षण गर्न सुझाए । त्यहीअनुसार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल गएर स्वाब दिएकी उनको मंगलबार राति कोरोना भाइरस ‘पोजेटिभ’ रहेको नतिजा आयो ।सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतकाअनुसार उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले जारी गरेको सवारी पास भएको गाडीमा नागढुंगासम्म आएकी थिइन् ।
भक्तपुरकी २५ वर्षीया कोरोना संक्रमित युवती पनि सोमबारै सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, झुम्काबाट फर्किएको खुलेको छ । सवारी पास भएको काकाको गाडीमा भक्तपुर आइपुगेकी थिइन् ।
दुबै प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् र यसले के देखाउँछ भने लकडाउनको समयमा पास बनाएर वा लुकिछिपी काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका अरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ ।
प्रहरीको तथ्यांकअुसार मंगलबार मात्र उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका नागढुंगाबाट ५८ वटा सवारीसाधन फर्काइए । तीमध्ये ५ वटा ट्रक र ५ वटा ट्यांकर पनि थिए ।
सोमबार फर्काएका ६६ सवारीसाधन मध्ये १९ वटा ट्याकंर, ट्रक र बस थिए । ‘ट्यांकर र खाद्यान्न, निर्माण सेवा लगायतका ट्रकले पनि मान्छे बोकेपछि फर्काएका हौं’, महानगरीय प्रहरी वृत्त, नागढुंगाका प्रमुख डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पास नहुनेसहित दैनिक ५०/६० वटा गाडी फर्काइरहेका हुन्छौं ।’